Diyo post :: म्याक्दीका १३ जना युवाहरु अमेरिका जाने आशमा अलपत्र छन् नाइजेरियाको बासमा ! म्याक्दीका १३ जना युवाहरु अमेरिका जाने आशमा अलपत्र छन् नाइजेरियाको बासमा ! - Diyo post
म्याक्दीका १३ जना युवाहरु अमेरिका जाने आशमा अलपत्र छन् नाइजेरियाको बासमा !
म्याग्दी, जेठ २८ । अमेरिका प्रवेशका लागि मोटो रकम बुझाएर नाइजेरियाको लागोसमा पुगेका म्याग्दीका १३ जना युवा अलपत्र परेका छन् ।